धनकुटा । १२ बिद्यालयहरुलाई पछिपार्दै १२ वटा स्वर्ण पदक जितेर १२ औ राष्ट्रपति तथा दास्रो छथर गाउँपालिका स्तरीय रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता सिंधुवाको सगरमाथा मा।बि।बोर्डिङ्ग स्कुलले जितेको छ ।
सिंधुवाको खेल मैदानमा २ दिन सम्म सन्चलन भएको बिभिन्न १५ वटा खेलको प्रतिष्प्रधामा पालिकाका १० सामुदायिक र २ निजी मा।बिहरुलाई पछि पार्दै सगरमाथाले पहिलो स्थान ओगटेको हो ।
२७ र २८ गते सम्पन्न रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगितामा ५÷५ स्वर्ण ल्याएपछि रजत र काँस्य पद जितेको आधार सरस्वती मा.बि.सिंधुवा दोस्रो र चुलाचुली मा.बि. तेस्रो भएका छन् ।
१३ वटा एथलेटिक्स सहित भलिबल र कपर्दी खेलका लागि छात्र–छात्रा बिद्यामा भएको ३० स्वर्ण ३० रजत र ३० काँस्य पदका लागि ४८३ बिद्यार्थीहरुले प्रतिष्प्रधा गरेका थिए । यद्यपी खेलको आकर्षका रुपमा रहेको भलिवल र कवडी खेलमा भने छात्र भलिवल तर्फ सारदा मा।बि।हात्तिखर्क बोझेनी र छात्रा भलिवल सहित कवडीका दुबै खेलको उपाधी शिल्ड उप–बिजेता सरस्वती मा।बि।ले जितेको छ ।
यी खेलहरुमा भलिवल छात्र तफको दास्रो उपाधी हात्तिखर्ककै पन्चमीका भारती मा।बि र छात्रा तर्फ शिल्ड बिजेता सगरमाथाले जितेको छ ।
छात्रा तर्फको तेस्रो सेतो गुराँस जोरपाटीले जितेको छ भने छात्र तर्फको स्थान रनिङ्ग शिल्ड बिजेता सगरमाथाले जितेको छ ।
कवडी तर्फको दोस्रो स्थानमा छात्र तर्फ शिल्ड बिजेता सगरमाथा मा।बि।र छात्रा तर्फ महाकाली मा।बि। ताम्लिङ्गले जितेको छ । तेस्रो स्थानमा छात्र–छात्रा दुबै बिद्यामा चुलाचुली मा।बि।ताँखुवाले जितेको छ ।
अन्य एथलेटिक्स खेल तर्फ १५०० मिटर दौडको छात्र तर्फ प्रथम स्थान चुलाचुली मा।बि।ताँखुवाका सागर लिम्ब र छात्रा तर्फ सरस्वती मा।बि।सिंधुवाका लक्ष्मी घिमिरेले जितेका थिए ।
त्यस्तै दोस्रो स्थानमा छात्र तर्फ सरस्वती मा।बि।ताँखुवाका जीवन लिम्बू र दामोदर मा।बि।सिंभुवाका सुनिता भट्टराईले जितेका छन् ।
दोस्रो पुरस्कारमा छात्र तर्फ भारती मा।बि।हात्तिखर्कका ताराबीर लिम्बू र छात्रा तर्फ तिलेश्वर मा।बि। तेलियाका मनिषा बि।क।ले जितेका छन् । १०० मिटर दौडको छात्रा तर्फ सगरमाथा मा।बि।का पूजा मगर प्रथम,महाकाली मा।बि।का लिलामायाँ काफ्ले दोस्रो र भारती मा।बि।का गीता गजमेर तेस्रो भएका छन् ।
छात्र तर्फ सेतो गुराँस मा.बि.का सविन बि.क. प्रथम,सगरमाथा मा।बि।का शुसिल शेर्पा दोस्रो र सारदा मा.बि. बोझेनीका सनम लिम्बू तेस्रो भएका छन् । ४०० मिटर दौडको छात्रा तर्फ सगरमाथा मा.बि.का निशा बिष्ट प्रथम,सरस्वती मा।बि।का आस्था लिम्बू दोस्रो र सेतो गुराँस मा.बि.का योगता आले मगर तेस्रो भएका छन् । छात्र तर्फ सगरमाथा मा.बि.का प्रसान्त श्रेष्ठ प्रथम,महाकाली मा.बि.का राजेश भुजेल दोस्रो र सरस्वती मा।बि।का नोमिस तेस्रो भएका छन् । सटपुट तर्फ छात्र खेलमा सगरमाथा मा।बि।का अर्जुन लिम्बू प्रथम,चुलाचुली मा.बि.का देवान दिम्बू दोस्रो र सरस्वती मा.बि.का प्रकाश मगर तेस्रो भएका छन् ।
छात्रा तर्फ चुलाचुली मा.बि.का मनिता लिम्बू प्रथम,चुलाचुली मा।बि।का कल्पना भट्टराई दोस्रो र सरस्वती मा।बि।का निवाहाङ लिम्बू तेस्रो भएका छन् ।
लङजम्प तर्फको छात्रा तर्फको खेलमा चुलाचुली मा।बि।का शिला जोशी प्रथम,महाकाली मा।बि।का लीलामायाँ काफ्ले दोस्रो र सगरमाथा मा।बि।का पूजा मगर तेस्रो भएका छन् ।
छात्र तर्फको खेलमा सगरमा मा।बि।का शुसिल शर्मा प्रथम, सरस्वती मा।बि।का सौरप गुरुङ्ग दोस्रो र चुलाचुली मा.बि.का निकेश सुन्दास तेस्रो भएका छन् । ट्रिपल जम्प छात्र तर्फको खेलमा सगरमाथा मा।बि।का प्रशान्त श्रेष्ठ प्रथम,सरस्वती मा।बि।का सौरप गुरुङ्ग दोस्रो,चुलाचुली मा।बि।का निकेश सुन्दास तेस्रो भएका छन् । छात्रा तर्फ चुलाचुलीका शिला जोशी प्रथम,सगरमाथा मा.बि.का रुशा बिष्ट दोस्रो,सरस्वती मा।बि।का आकृति गुरुङ्ग तेस्रो भएका छन् ।
३०० मिटर दौड छात्र तर्फ सगरमाथा मा.बि.अर्जुन लिम्बू प्रथम,चुलाचुली मा।बि।का सागर लिम्बू दोस्रो र महाकाली मा.बि.का बालकर्ण नेपाली तेस्रो भएका छन् । छात्रा तर्फ सारदा मा.बि.का मविका लिम्बू प्रथम,सगरमाथा मा.बि.का प्रकृति कार्की दोस्रो र सरस्वती मा।बि।का आकृति गुरुङ्ग तेस्रो भएका छन् । ८०० मिटर दौडको छात्रा तर्फको खेलमा सरस्वती मा.बि.का लक्ष्मी घिमिरे प्रथम,महाकाली मा.बि. कमला श्रेष्ठ दोस्रो र भारती मा।बि।का गीता गजमेर तेस्रो भएका छन् ।
छात्र तर्फको खेलमा सगरमाथा मा.बि.का अर्जुन लिम्बू प्रथम,सरस्वती मा.बि. का जीवन लिम्बू दोस्रो र चुलाचुली मा।बि।का प्रकाश लिम्बू तेस्रो भएका छन् । ज्याब्लिन थ्रो छात्रा तर्फको खेलमा चुलाचुली मा.बि.का धनमायाँ राई प्रथम,सरस्वती मा.बि.का दालामू लामा दोस्रो र सरस्वती मा।बि।का टीका भूजेल तेस्रो भएका छन् ।छात्र तर्फको खेलमा सारदा मा.बि.का सनम लिम्बू प्रथम, लक्ष्मी मा.बि.का सोनाम दर्लामी दोस्रो र चुलाचुली मा।बि।का निरमल श्रेष्ठ तेस्रो भएका छन् ।
२०० मिटर छात्र दौडमा सगरमाथा मा।बि।का प्रशान्त श्रेष्ठ प्रथम,चुलाचुली मा.बि.का निरमल श्रेष्ठ दोस्रो र सेतो गुराँस मा.बि.का सुजन बस्नेत तेस्रो भएका छन् । छात्रा तर्फको खेलमा सगरमाथा मा.बि.का पूजा मगर प्रथम,सरस्वती मा.बि.का मेलिना थापा दोस्रो र भारती मा।बि।का बिनिता लिम्बू तेस्रो भएका छन् ।
हाईजम्प छात्र तर्फ लक्ष्मी मा।बि।का हिमाल कार्की प्रथम,सदिप्त मा।बि।का दिपेश थापा दोस्रो र महाकाली मा.बि.का पोष्टबहादुर लिम्बू तेस्रो भएका छन् । छात्रा तर्फको खेलमा महाकाली मा.बि.का लिलामायाँ काफ्ले प्रथम,सरस्वती मा.बि.का आकृति गुरुङ्ग दोस्रो र सरस्वती मा।बि।का निशा बिष्ट तेस्रो भएका छन् ।
४ गुना १०० मिटर रिले खेलको छात्रा तर्फ सगरमाथा मा.बि. प्रथम,महाकाली मा.बि.दोस्रो र चुलाचुली मा.बि. तेस्रो भएको छ । छात्र तर्फको खेलमा सेतो गुराँस मा।बि। प्रथम, सगरमाथा मा.बि. दोस्रो र चुलाचुली मा.बि. तेस्रो भएको छ ।
४ गुना ४०० छात्रा तर्फको रिले दौडमा सगरमाथा,सेतो गुराँस,लक्ष्मी मा.बि.क्रमश प्रथम,दोस्रो र तेस्रो भएका छन् । छात्र तर्फको खेलमा चुलाचुली,सगरमाथा,सेतोगुराँस मा।बि। क्रमश प्रथम दोस्रो र तेस्रो भएका छन् ।
बिजेता,उप–बिजेता बिद्यालय तथा बिद्यार्थीहरुलाई जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका प्रमुख टंक चौहान,गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बू,उपाध्यक्ष भीमकला क्षेष्ठ,खेलकुद बिकास समिति छथरका चन्द्र लिम्बूले नगद,शिल्ड,मेडल र प्रमाण–पत्र दिएर सम्मान गर्नुभएको थियो ।
पालिकाको आयोजना तथा श्री सरस्वती मा।बि।सिधुवाको सह–आयोजनामा सम्पन्न भएको खेलमा राष्टिय निर्णायक सुरेश रिजालको संयोजकत्वमा ८ जनाको निर्णायक टोलीले खेल खेलाएको छ ।
खेलमा बिजेता र उप–बिजेता छात्र–छात्राहरुले बिद्यालयका तर्फकाट बैसाख ५ र ६ गते धनकुटामा सम्पन्न हुन गईरहेको जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन् ।